Qiyaasaha Beddelka ee Blogging Business | Martech Zone
Qiyaasaha Beddelka loogu talagalay Blogging Business
Isniin, Janaayo 11, 2010 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Waxaa jira in badan oo ka mid ah warbaahinta bulshada adduunka halkaas oo xukuma guusha blog-ka ee cabbiraadda hawlgelinta sida faallooyinka. Ma yeelo Ma jiro wax xiriir ah oo u dhexeeya guusha boggan iyo tirada faallooyinka ku saabsan. Waxaan aaminsanahay in faallooyinka ay saameyn ku yeelan karaan baloog - laakiin maxaa yeelay maahan wax aad si toos ah u xakameyn kartid anigu dhag uma dhigin.
Haddii aan rabo faallooyin, waxaan qori lahaa cinwaannada isku-xidhka-khabiiciga ah, nuxurka muranka dhaliyay, iyo qoraallada baloogga ee xiisaha leh. Tani, markeeda, waxay lumin doontaa dhagaystayaasheeda asaasiga ah waxayna beegsan doontaa dadka khaldan.
Saddex cabbiraad beddelaad ganacsi oo ganacsi ayaan fiiro gaar ah u leeyahay:
Natiijooyinka Mashiinka Raadinta Beddelaadda Bogga - Khubaro badan ayaa diiradda saaraya inta taraafikada makiinadaha raadinta ee aad heshay… laakiin maaha inta taraafikada ee aad lumisay. Haddii aad qorto cinwaanno siman oo xogtaada meta aysan ahayn mid soo jiidasho leh, waxaa laga yaabaa inaad sare u kacdo qiimeynta makiinadaha raadinta laakiin waxaa laga yaabaa in dadku aysan gujin xiriirkaaga. Qor ciwaanada boostada oo beddela taraafikada oo hubi in sharraxaadahaaga meta ay ka buuxaan kelmado fure ah iyo sabab weyn oo lagu dhex riixo! Isticmaal Google Search Console si aad u falanqayso natiijooyinkan.
U Wacan Beddelka Ficil - Soo-booqdeyaasha markii ugu horreysay waxay ku soo degayaan balooggaaga oo midkood ka tagaya ama raadinaya inuu ganacsi kula sameeyo. Ma waxaad siisaa waddo ay kula macaamilaan shirkaddaada? Ma haysaa foom xidhiidhka iyo isku xidhka caanka ah? Ciwaankaga iyo talefankaga si cad ma loo aqoonsaday? Ma leedahay Wicitaanno Ficil ah oo soo jiidasho leh oo booqdayaashu ay gujinayaan?
Beddelka Bogga Soo Degitaanka - Ka dib markay martidaadu gujinayaan Wicitaankaaga Waxqabadka, ma waxay ku degayaan bog ka dhigaya inay beddelaan? Ma tahay liyo bogga nadiifka ah ee ka baxa marin habaabinta, xiriiriyeyaasha, iyo waxyaabaha kale taasi ma waddo iibka?
Rajadaadu waa inay beddeshaa tallaabo kasta oo jidka ah si aad u hesho macaamiil ahaan. Waa inaad soo jiidataa gujintooda bogga natiijooyinka mashiinka raadinta (SERP), waa inaad siisaa waxyaabo khuseeya si aad u kasbato kalsoonidooda oo aad ku qasbeyso inay si qoto dheer u qodaan, waana inaad siisaa dariiqa ka-qaybgalka - sida wicitaan adag oo ficil ah ( CTA) oo waa inaad siisaa si ay kula soo xiriiraan - sida bogga degitaanka oo si wanaagsan loo qaabeeyey.
Isku-darka Ku fuliya dhaqamadan ugu wanaagsan!
Marka hore: Natiijada mashiinka raadinta ee Xisaabinta Blogging Business ROI, Compendium wuxuu leeyahay kaalinta labaad oo si wanaagsan ayaa loo qoray - waa hubaal inuu soo jiito taraafikada qaar!
Fiiro gaar ah: Waxaad ogaan doontaa in Compendium uu leeyahay natiijada labaad ee raadinta oo aan ahayn natiijada koowaad. Haddii cinwaanka bogga uu lahaa Compendium Blogware dhamaadka ciwaanka halkii uu ka ahaan lahaa bilowga, taariikhda, iyo macluumaadka qoraaga waa la tuuray, sharraxaadda meta-na waxay lahayd luqad soo jiidasho leh, waxay xitaa awoodi karaan inay soo saaraan natiijada darajada sare. (Waa wax aad u wanaagsan in sharraxaadda meta ay ka bilaabato ereyga muhiimka ah, in kastoo!) Isbeddeladaas waxay labanlaabmi karaan ama saddex jibaari karaan beddelaadkooda bogga natiijooyinka raadinta raadinta.
Midda labaad: Waa qoraal kooban oo qurux badan oo toosiya dareenka laba ilo oo dheeraad ah si loo xisaabiyo Soo noqoshada Maalgashiga. Tani waa qoraal adag oo khuseeya, in kastoo!
Fiiro gaar ah: Hal dariiqo oo tan lagu wanaajin karo ayaa laga yaabaa inay ahayd in la bixiyo kheyraad saddexaad - wicitaanka dhabta ah ee ficilka Qalabka ROI.
Saddexaad: Wicitaanku waa mid aad u qurux badan oo la xidhiidha nuqulka bogga, waana dariiq cad oo lagu helo macluumaad dheeraad ah!
Afaraad: Bogga degitaanku gabi ahaanba waa bilaa cillad - bixinta taageero, tusmooyin soo jiidasho leh, foom gaaban oo lagu ururiyo macluumaadka xiriirka kooxda iibka, iyo xitaa qaar ka mid ah su'aalaha hordhaca ah si loo helo dareenka miisaaniyada rajada iyo dareenka degdega ah.
Kooxda suuq geynta ee Compendium waa wax cajiib ah markay si buuxda uga faa'iideystaan ​​qalabkooda. Waan ogahay xaqiiqda ah in Compendium uu soo uruuriyo hogaamin badan iyada oo loo marayo natiijooyinka raadinta iyo barta u gaarka ah marka loo eego ilo kale. Shaki kuma jiro inay sabab u tahay shaqada cajiibka ah ee ay ka qabtaan imtixaanka, dib u tijaabinta iyo hagaajinta dariiqa ay u rogayaan. Wanaagsan!
Shaacinta Buuxda… Aniga ayaa leh saamiyo waxaanan caawiyay bilaabida Compendium (mahadsanid wanaagga ma aysan raacin astaanteyda!)
Tags: hubinta ganacsigacabirrada beddeliddablogging shirkadaha
Shift wuxuu dhacayaa 2009
Sayniska Mawduuca: U beddelo xiriiriyeyaashaaga 'Plain Jane' Mawduuc Macnaha Guud ee Killer